Ibhokisi/Ibhokisi nabanye Abakhiqizi Nabahlinzeki Bemishini Yokulebula Okuphezulu - I-China Box/Carton nabanye I-Surface Labeling Machine Factory
① I-FK811 ifanele zonke izinhlobo zokucaciswa kwebhokisi, ikhava, ibhethri, ibhokisi kanye nemikhiqizo eyisisekelo engavamile neyisicaba, efana nekani lokudla, ikhava yepulasitiki, ibhokisi, ikhava yethoyizi kanye nebhokisi lepulasitiki elimise okweqanda.
② I-FK811 ingafinyelela ukulebula okugcwele okugcwele, ukulebula okunembe ngokwengxenye, ukulebula okumile okulebula okuningi okuvundlile kanye nokulebula okunezingqimba okunezingqimba eziningi, kusetshenziswa kabanzi ezimbonini zamabhokisi, zikagesi, ezivezayo, zokudla nezokupakisha.
① FK812 Ukufakwa ilebula okuzenzakalelayo kwemikhiqizo yamakhadi, iletha ngokuzenzakalelayo umkhiqizo ebhandeni lokuthutha kanye nokulebula, kusebenza ekhadini, esikhwameni sepulasitiki, emakhathoni, ephepheni kanye neminye imikhiqizo yokusika, njengepulasitiki elincanyana kanye nokulebula kwe-chip encane.
② I-FK812 ingafinyelela ukulebula okugcwele okugcwele, ukulebula okunembe ngokwengxenye, ukulebula okuqondile okulebula okuningi okuvundlile kanye nokulebula okunezingqimba okunezingqimba eziningi, kusetshenziswa kabanzi ezimbonini zamabhokisi, epulasitiki, kagesi, ekhadini nasezimbonini zokunyathelisa.
Umshini Wokufaka ilebula we-FK618 Semi Automatic High Precision High
① I-FK618 ifanele zonke izinhlobo zokucaciswa kwesikwele, isicaba,imikhiqizo emincane egobile nengajwayelekile ukunemba okuphezulu nokulebula okugqagqene okuphezulu, okufana ne-electronic chip, ikhava yepulasitiki, ibhodlela le-cosmetic flat, ikhava yethoyizi.
② I-FK618 ingafinyelela ukulebula okugcwele okugcwele, ukulebula okunembe ngokwengxenye, okusetshenziswe kabanzi kuma-electron, izimpahla ezithambile, izimboni zokupakisha, izimonyo kanye nempahla yokupakisha.
③ Umshini wokulebula we-FK618 unemisebenzi eyengeziwe yokwengeza izinketho: umshini ozikhethela wona wokufanisa umbala wokubhala ikhodi ungangezwa ekhanda lelebula, futhi iqoqo lokukhiqiza, idethi yokukhiqiza nosuku lokuphelelwa yisikhathi kungaphrintwa ngesikhathi esifanayo.Yehlisa inqubo yokupakisha, uthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza, inzwa yelebula ekhethekile.
Umshini wokulebula womugqa oseceleni we-FK836 Automatic ungafaniswa nolayini wokuhlanganisa ukuze ulebule imikhiqizo egelezayo endaweni engaphezulu kanye nendawo egobile ukuze kuqashelwe ukulebula okungaxhunyiwe ku-inthanethi okungenamuntu.Uma ifaniswe nebhande lokudlulisa ikhodi, ingalebula izinto ezigelezayo.Ukulebula okunembe kakhulu kugqamisa ikhwalithi enhle kakhulu yemikhiqizo futhi kuthuthukisa ukuncintisana.Isetshenziswa kabanzi ekufakweni, ukudla, amathoyizi, amakhemikhali nsuku zonke, i-electronics, imithi kanye nezinye izimboni.
① I-FK617 ifanele zonke izinhlobo zokucaciswa kwemikhiqizo eyisikwele, eyisicaba, egobile futhi engajwayelekile endaweni engaphezulu, efana namabhokisi okupakisha, amabhodlela ayisicaba wezimonyo, amabhokisi ayi-convex.
② I-FK617 ingakwazi ukufeza ukulebula okugcwele kwendiza, ukulebula okunembile kwendawo, ukulebula okuqondile kwamalebula amaningi kanye nokulebula okuvundlile okunezingqimba zamalebula amaningi, ingalungisa ukuhlukaniswa kwamalebula amabili, asetshenziswa kabanzi ekupakishweni, imikhiqizo kagesi, izimonyo, izimboni zezinto zokupakisha.
③ I-FK617 inemisebenzi eyengeziwe ezokwandisa: iphrinta yekhodi yokumisa noma iphrinta ye-ink-jet, lapho ilebula, phrinta inombolo yebheshi yokukhiqiza ecacile, usuku lokukhiqiza, idethi esebenzayo kanye nolunye ulwazi, ukubhala ngekhodi nokulebula kuzokwenziwa kanyekanye, kuthuthukiswe ukusebenza kahle.
I-FK839 Automatic Bottom Production Line Labeling Machine ingafaniswa nolayini wokuhlanganisa ukuze ilebula imikhiqizo egelezayo endaweni engaphezulu nendawo egobile ukuze kuqashelwe ukulebula okungaxhunyiwe ku-inthanethi okungenamuntu.Uma ifaniswe nebhande lokudlulisa ikhodi, ingalebula izinto ezigelezayo.Ukulebula okunembe kakhulu kugqamisa ikhwalithi enhle kakhulu yemikhiqizo futhi kuthuthukisa ukuncintisana.Isetshenziswa kabanzi ekufakweni, ukudla, amathoyizi, amakhemikhali nsuku zonke, i-electronics, imithi kanye nezinye izimboni.
Ifakwe ngezansi komugqa wokuhlanganisa, ilebula endizeni engezansi kanye nendawo ehlanganisiwe yezinto ezigelezayo.Umshini we-inkjet ozikhethela wona ku-conveyor ukuze uphrinte idethi yokukhiqiza, inombolo yeqoqo, nosuku lokuphelelwa yisikhathi ngaphambi noma ngemva kokulebula.